China CNC EDM Hole Drill Machine (HD-30CNC) Kugadzira uye Fekitori | BiGa
Yekumhanyisa pinhole yekugadzirisa muchina inonyanya kushanda kune yakagadziriswa simbi isina simbi, yakaoma simbi, yakaoma chiwanikwa, mhangura, aruminiyamu uye dzakasiyana mhando dzekuitisa zvinhuIyo inogona kunanga mukati kana kukanda kubva kune cant, camber uye pyramidal kumeso.
Yekumhanyisa pinhole yekugadzirisa muchina inonyanya kushanda kune yakagadziriswa simbi isina simbi, yakaoma simbi, yakaoma chiwanikwa, mhangura, aruminiyamu uye dzakasiyana mhando dzekuitisa zvinhuIyo inogona kunanga mukati kana kukanda kubva kune cant, camber uye pyramidal kumeso. Muchina unoshanda mukugadzirisa usingadzoreke pini yakadzika senge tambo yekumonera tambo yekucheka pane yakasarudzika-yakaoma kuitisa zvinhu, kamuri kuvhurwa kwepombi yemafuta, spinneret orifice yekutenderera kufa, mafuta nzira ye hydropneumatic zvikamu uye kutonhora gomba reinjini.
1. Fast kugadzira kumhanya uye yakaderera kushandiswa
2. Isai nhamba yekuratidzira
3. Ultra ukobvu: main axis kufamba 300, kushandisa kune gobvu chikamu kugadzira.
4. Ultra kufamba: servo yekufamba mazana matatu, yakarebesa magetsi pole inowanikwa uye 15% yekuchengetedza pole
5. Z-axis inoshandisa mbiri yakatwasuka rack zvine hunyanzvi uye kugadzikana kwakanaka.
6. X uye Y axis inoshandisa bhora rinotakura lead sikuru nyore kuve nechokwadi chekudyisa chaiyo.
7. Iyo kona yeiyo main axis inogadziriswa kune angling gomba kugadzira.
8.Magetsi achichinja uye ari nyore mashandiro.
Parameter dzeCCC EDM Hole Drill
Shanda tafura dhizaini 450 * 300mm
Electrode dhayamita 0.15-3.0mm
Z1 axis kufamba 350mm
Z2 akabatana kufamba 200mm
Kufamba kwe xy axis 350 * 250mm
Imput simba 3.0kw
General magetsi 380v 50HZ
Max machine yazvino 30A
Max.workpiece uremu 180kg
Kurema kwemuchina 800kg
Zviratidzo zvemuchina (L * W * H) 1100 * 1000 * 1970mm
Saizi yekumusoro yekumisikidza 1800 * 2000mm
Pashure: EDM Hole Drill Machine (XZ8-F)
Zvadaro: Kupisa Kutengesa BiGa ZNC 450 Yakakwira yepamusoro Taiwan CTEK inodzora Die Sinking Machine / Die Sinker Yemagetsi Kubuda Machine EDM
China Edm Micro Hole Kuchera Machine
China Hole Kuchera Edm Machine
Cnc Micro Hole Kuchera Edm
Yakadzika Hole Kuchera
Magetsi Edm Drill Hole Machines
Yekumhanyisa Edm Diki Hole Kuchera Machine
Yekumhanyisa Hole Drill Edm
Yekumhanyisa Hole Kuchera Machine
Yekumhanyisa Micro Micro Hole Edm Drill
Micro Hole Kuchera
Diki Hole Kuchera Edm
Diki Hole Edm Kuchera
EDM cheki muchina CNC
Kupisa Kutengesa BiGa ZNC 450 Yakakwira mhando Taiwan CTEK ...
Gantry Yakapetwa Musoro Wepamusoro Kugaya Machine, Gantry Double-End Surface Grinding Machine, Gantry Surface Kukuya Machine, Gantry Imwe Musoro Wepamusoro Pamusoro Kugaya Muchina, Gantry Imwe-Yekupedzisira Surface Kukuya Machine, Gantry Rudzi rwepamusoro Kugaya Machine,